Tottenham ayaa garoonkeeda ku ciyaaraysa markii labaad muddo shan maalmood gudahood ah, waxaanay caawa ku martigelin doontaa Chelsea oo ay ku ballansan yihiin wareegga afraad ee tartanka Carabao Cup, kaas oo midkooda laga badiyo uu si toos ah uga hadhi doono tartanka.
Labada kooxood ayuu kulankani ugu soo beegmay xilli ay ku jiraan toddobaad xun oo ay kulamadoodii horyaalka Premier League mid walba barbarro soo gashay, laakiin kooxda tababare Jose Mourinho oo usbuucii kasii horreeyey dhoolatus weyn samaysay ayaa ku niyadsan in garoonkeeda ay qaab dhismeedkiisa la qabsatay uu caawin doono, inkasta oo aanay jirin jamaahiirtii qaylada ku garab taagnaan jiray.
Jose Mourinho iyo Frank Lampard ayuu culays weyni saaran yahay, waxaana midkooda guul-darro usoo hoyato caawa sii xumaan doonta rajadiisa iyadoo ay isasoo tarayaan baaqyo ka imanaya jamaahiirta oo lagu dalbanayo in shaqada laga caydhiyo, taas oo kusii badan Frank Lampard oo lacag badan suuqa geliyey.
Tottenham waxay Axaddii barbarro 1-1 ah la gashay Newcastle United iyada oo joogta isla garoonkeeda caawa lagu ciyaarayo, waxaana daqiiqaddii ugu dambaysay laga dhaliyey rikoodhe, laakiin wareeggan Carabao Cup ayay usoo baxday iyadoon ciyaarin oo ay baaqatay kulankii ay kula ballansanaayeen Leytown Town usbuucii hore oo Spurs ay tartanka Europa League la ciyaartay Maccabi Haifa.
Chelsea ayaa dhinaceeda barbarro ay waliba helitaankiisa u dagaallameen ay kusoo kala baxeen West Brom oo 3-0 qaybtii hore ku hoggaaminaysay, laakiin Tammy Abraham ayaa waqtigii dheeraadka ahaa u dhaliyey goolka dhibicda u badbaadiyey, waxaanay sidaas ku noqotay kooxdii ugu horreysay Premier League tan iyo February 2011 ee iyadoo 3-0 qaybta hore lagu hoggaaminayay haddana barbarro keenta ee ka badbaada guul-darro.
Ciyaarta: Tottenham vs Chelsea
Tartanka: Carabao Cup, wareegga afraad
Garoonka: Tottenham Spurs Stadium
Mourinho ayay kooxdiisu ka cabanaysaa dhaawacyo dhinaca weerarka ah oo uu ugu dambeeyey Son Heung-min oo ku dhaawacmay kulankii Newcastle United, waxaanu ku biiray Gareth Bale iyo Japhet Tanganga oo hore dhaawacyo ugu jiigay, waxaase uu tababaraha reer Portugal keeni doonaa Moussa Sissoko oo beddel kusoo galay kulankii Newcastle kaddib markii uu kasoo bogsaday xanuun hayay.
Isbeddello badan ayaa shaxda Tottenham lagu arki doonaa, waxaana la filayaa inay kasoo muuqdaan saxeexa cusub ee Sergio Reguilon oo dhinaca bidix ka ciyaari doona, Tanguy Ndombele, Toby Alderweireld iyo Joe Hart.
Chelsea waxa dhinaceeda la arki doonaa isbeddel, laakiin xiddigaha ciyaaraya ayaa noqon doona laacibiinta waaweyn ee aan booska joogtada ah haysanin inkasta oo lagu dari doono qaar ka mid ah saxeexyadii cusbaa, sida Chilwell iyo Kai Havertz.
Difaaca reer England ee Chilwell ayaa beddeli doona Marcos Alonso oo ciyaar liidata soo bandhigay kulankii West Brom, sidoo kalena goolhayaha cusub ee Mendy ayaa la filayaa inuu ciyaartiisii ugu horreysay kasoo muuqan doono.
Laakiin Hakim Ziyech, Christian Pulisic iyo Billy Gilmour ayaan kulankan joogin.